QAABKEE AYAY U WADA HADLEEN WARIYAYAASHII HOLLAND KU KULMAY?
Bishan aan ku jirro horaanteedii ayaay wariyayaasha idaacadaha iyo shabakadaha Internetka ka hawlgala badi wadamada reergalbeedka ku kulmeen dalka Netherland.
Waxaa kulanka qabanqaabisay hay'ad u xilsaaran abaabulka guud iyo kawarhaynta danaha soomaaliyeed ee dibadjoogta oo marka magaceeda lasoo gaabiyo layiraa "SONECA".
Qaabkii soo dhowaynta.
Maqribnimadii markaan gaaray waxaa iridda hoteelkii igaga horyimid nin ii sheegay in uu u dhashay dalka ERITREA gudiga qaban qaabaduna u magacaabeen inuu soo xero galiyo habaqlaha martida ,wuxuu ii gudbiyay hoolka soo dhowaynta gaarka ah halkaasoo ay sii fadhiyeen wariyayaashii kulanka yimid,waxaa markii iigu horaysayba iga hortimid gabar" walaal soo dhowaaw waxaa la iyiraahdaa siciido sheekh axmad (VIP) radio sagal".
Waxaa ay si naxariisleh ii gudbisay miis ay fadhiyeen dad aan aad u maqli jiray aragoodana aan aad ugu farxay.
-Ikraan cali kaar "SWEDEN"
-Axmad Bille Rafle Guuleed "Denmark"
_ iyo musharixii hore ee duqa magaalooyinka mataanaha ah ee MINIAPOLIS/ST.PAUL, Minnesota, U.S.A Mudane Mohamuud Wardheere.
-Siciido VIP waxaa maalintii danbe la ii sheegay in ay wax ku lahayd fikirka ah in ay wariyayaashu kulmaan, waxaanan taas ku ogaaday furitaankii labaad ee kulanka oo mahad naq balaaran gudiga qaban qaabadu halkaas uga soo jeediyeen
Maalinimadii labaad sagaalkii subaxnimo waxaa nooyimid labanin oo cadaan ah. waxaa nalaku baray Pieter De Vink oo ah wariye aad looga danbeeyo dalka nietherland iyo Mr Tony Wilkson oo isnna ka socda dalka ingiriiska.
Waxaa islamarkiiba makarafoonka la wareegay Mr Tony Wilkson,.
Wuxuu yiri "waan ku faraxsanahay in aan wakhtigayga maanta laqaato wariyayaal da,yar oo soomaaliyeed, waxaanan idin waydiinayaa dhowr su,aalood inta aanan idiin bilaabin duruusta iyo casharadii aan ku soo talagalay in aan idin siiyo . Su,aashaas jawaabteedii oo aan maanta kaga hadlaayo qoraalkeenna . waxaa ay nagu qaadatay sadex saacadood ka shaqaynteedii, wariye walba waxaa lasiiyay 15 daqiiqadood uu su'aashaas jawaab kaga bixiyo,waxaa ayna hayd su,aashaasi.
MAXAAD U GO,AANSATAY inaad wariye NOQOTID?;
WAXAA JAWAABIHII WARIYAYAASHU BIXIYEEN OO SIDAN U DHACDAY UGU HORAYSAY SICIIDO VIP WAXAYNA TIRI:
Waxaan aad ugu degaalamijiray xuquuqda dadka ladulmo sida haweenka iyo qabaailada laga tirada badanyahay, waxaa ayna ila noqotay meesha kali ah ee aan qaylo dhaantayda ka tabin karo in ay tahay anigoo wariye noqda. waxaan kaloon is iri kuwa ladulmo wariyaha soomaaliga laftiisa ayaa kamid ah,isagoo la caburiyay,laguna qasbay in uu isku mashquuliyo warar aan dan u ahayn saxaafadda xorta ah balse in gaara u adeegta.
WARIYIHII 2aad=waxaan rabay inaan caan noqdo.
wariyihii 3aad =waxaan rabay in aan bulshada xag siyaasadeed ka dhex muuqdo anigoo siyaasada aad u xiisayn jiray.
WARIYIHII 4aad=inaan ka agdhowaado luuqadaha caalamiga ah oo aan u arkaayay in wariyanimada laga dhex helaayo.
WARIYIHII 5aad=inaan bulshada macalin u noqdo,waxaanan is tusay waxa aan doonaayo in ay dadku bartaan in aan wariye nimada u adeegsan karo.
WARIYIHII 6aad=markaan ardayadda ahaa idaacadii radio muqdisho ayaan aad u dhagaysan jiray,waxaan dabeed jeclaystay bal anigana in markayga laydhagaysto.
WARIYIHII 7aad=waxaan xasuustaa in ay ahayd gabarta aan u bixiyay xidigta saxaaffadda dhanka hablaha WARIYE ikraan cali kaar,waxayna tiri: waxaan u shaqeeyaa hay,ad ku hawllan dadka soomaaliyeed ee aan dalka ay yimaadaan wax ka qabsan karin caawisa ama garab gasha annakoo u fududaynna waxa ay qabsan kariwaayaan, waxaan is iri armaad wariye noqotaa si,ay kuugu sii fududaato in aad si cod dheer leh u gaarsiisid dadka soomaaliyeed fariinta aad rabtid in ay helaaan,.
WARIYIHII 8aad=waxaan yaraantaydii aad iskugu mashquulin jiray in aan wax ka ogaado fikir ahaan iyo karti ahaanba waxa ay ku kala duwanyihiin madawga iyo caddaanku,waxaanan is tusay in aan labadan qawmiyadood ku dhex gali karo gooni goonina wax uga waraysan karo anigoo laba arimood mid noqda . waa tan koobaade inaan jaajuus (ciidamada sirta)noqdo ama aan wariye noqdo,
WARIYIHII 9aad=aad ayuu nooga qosliyay oo wuxuu yiri"markii aan iskuulka dhiganaayay ayaan gabar soomaaliyeed oo aniga ila quruxbadnayd aad u caashaqay,kadib markii aan fariintaydii jacaylka gabadhaas u sheegtayna ,waxay ii caddaysay in ay jeceshahay nin wariye ah balse aysan muuqaalkiisa wali indheheedu qaban ee codkiisa oo kaliya taqaanno",waxaan maalintaas wixii ka danbeeyay is waydiiyay ma haboontahay in aad wariye noqotid, markiise aan wariye noqday waxaa ii baxday in hawlaha i horyaalaa ay ka bari weyn yihiin jeceelkaygii iyo gabartii bilicdasamayd,ee aan aflibaax dhexgalay la iigana baahanyahay inaan ka dabaasho.
Markii ay arintaasi dhamaatay ayaa waxaa markale si darandooriya su,aalo iyo jawaabo noogu boobay labadii wariye- PIETER iyo TONY WILKSON, waxaa ayna u dheceen sidatan.
A)Saaxiibayaal ma ku heshiinkarraa in ay wariye nimadu ka wayntahay shaqo lacag lagu sameeyo oo kali ah?
B) aniga PIETER ahaan waxaa ay dadka reer holand iga sugaayaaan in aan qalo mawqifka siyaasiga iyo siyaasadda ee bal iisheega oo maxay wariyaha soomaaliga ka sugayaan soomaalidu?
C) saw maaha shaqada wariye nimadu U sawir siday ahayd waxaad aragtay? una sheeg sidooda waxaad maqashay. ogaadana hadaydaan dayicin warshada wararka samaysaa waa warshad lacag samaysa, ogaadana goolkasta oo aad usocotid hanoqon wariye beenaale ah, hana moogaanin in astaanta ugu weyn ee wariyuhu tahay dulqaad. iyo ruux kala haadin kara ujeedada uu damacsanyahay ruuxa uu la sheekaysanaayo.
Shirka oo socday sadex maalmood waxaa lamagacaabay gudi daba gala go,aamadii halkaas ka soobaxay, iyadoo marlabaad dib laysugu soolaaban doono, dalka lagu qaban doono waxaa go,aamin doona gudiga loo xilsaaray.
Waxyna isku dhaarsadeen wariyayaashu in ay iska ilaaliyaan u adeegidda dagaal ooogayaasha.
Faafin: SomaliTalk.com | germany